Soomaali lagu qiyaamay in ay saxiixaan heshiis koronto | Somaliska
Qoysas Soomaali ah oo ku nool tuulo lagu magacaabo Bräcke oo ku taala waqooyiga Sweden ayaa lagu qiyaamaday in ay saxiixaan heshiis koronto oo 2 sano ah. Wargeyska LT oo arintaan wax ka qoray ayaa sheegay in 8 famil oo aan waxna qorin waxna akhrin kana soo jeeda Somaliya ay qalinka ku duugeen heshiis koronto oo aysan fahmin.
Shaqaale ka socda labo shirkadood oo lagu magacaabo EON iyo Telge Energi ayaa albaabada ku garaacay familada Soomaalida oo la sheegay in ay qaasatan raadsadeen guryaha ay ku qoranyihiin magacyada Soomaalida oo keliya. Siday ay isku fahmeen laba cadayn balse Soomaalida ayaa la sheegay in ay saxiixeen heshiiska. Qaar ka mid ah Soomaalida ayaa xitaa heshiis la saxiixday labada shirkadoodba taasoo la yaab ku noqotay shaqaalaha la shaqeeya Arbetsförmedlingen.
Shirkadahaan ayaa lagu eedeeyay in ay ka faa’ideysteen dadka wadanka ku cusub oo aan luuqada garanayn. Soomaalida dhacdadaan ku dhacday ayaa hada waxaa caawinaya shaqaale la shaqeeya Xafiiska Shaqada sidii ay uga noqon lahaayeen heshiiska ay sida aqoon la’aanta ah ku galeen.
Arintaan ayaan ahayn mid cusub oo lama tiro koobi karo inta aan la kulmay Soomaalida heshiis aysan fahmin iska saxiixay ama internetka wax ka dalbaday iyagoon fikrad fiican ka haysan. Dadka qaar ayaa sidoo kale waxay heshiis ku galaan marka telefoonada ay ka soo wacaan shirkada wax xayaysiiya.
Waxaa muhiim ah in aad ogaato in aadan saxiixin heshiis aadan fahmin. Dadka ogaal la’aanta ku saxiixa heshiisyada ayaa ugu dambeyn ku dhacaya Hay’ada Kronofogden oo mustaqbalka uga ciyaaraysa. Haddii lagugu qiyaamo in aad heshiis ku gasho qadka telefoonka ama internetka waxaa kuu furan 14 maalmood oo aad si xor ah uga noqon karto.
asc walala yal wa jiran dadkas aniga malin malmaha ka mid ah shirkad telefon aya iso wacday o dhehesa com hem iska sar anaka 4 bil fari ah ku sinayna kadib aya lacagta bilawesa marka wax aya ka qora marka kula hadlo ok i dheh markas ayan dhahay warqad i so dir an aqriya kadib ayan ok ama ma rabo ku dhaha maya ee hada ok dheh marka ku aqriya maya ayan dhahay walh halsac aye ok dheh waxa an ku shego waxan ku qayasay codka aye duban rabtay anigo ok dhahaya wlh wa iga tagtay lee marka walalaha iska ilaliya dugatas
asc waa sax waa aay duubtan codka maxa yeelay markaad ok dhahdo ayeey kuu so diree warqada biilka kadibna saas ayaad ugu jirtaa cubka mana laga yeelaayo aniga madihin oo waxa u duuban codkaaga anigaba saas wey igu dhacday oo waxay i dhaday anagaa ku siinayno bilooyin free ah ee ogolow oo kaliya mana ka qaadan warkaa oo swaxaan ugu soo koban uma baahni waan haystaa shirkad kalena ma rabo ha xumaato ama ha fiicnaato tan an hada haysto oo kaliya ayaa i anfaceyso markaa xitaa ima aysan dhini hejdå oo wey igu jartay oo klaiya marka waa tuugo kana faa`iideysta dadka an luqada fahmayn ha layska ilaliyo warqada hortaada taalo iyo kuwa taleefanada wax ku xayeeysiiya intaba wana mahdsan tiin inta hada aay dhibta soo gartayna Alaha uga saqiro
lacag waaba iska dhiibi doontee e, qiyaas haddii aad Hospitalka u saxiixdo wax aadan garanayn?
best article ever. says:
waa maqaalkii ugu fiicna ee aan arko intii aad maqaal soo qoraysay abowe wanan kugu tageersanahay inaad soo qorto wax umada wax u taraya una digayaa, mahadsanid.
Asc walaalayaal waa wax jira shirkadahaan waa waax aan maalin walba la kulmo maxaa yeelay waxaan ahay shaqaale Soomaali keliyana ma haysto ee ajaanibta oo dhan ayay heysataa aniga & ayagana maalin walba naftaan isku keenay .
Aniga waxaan kutala talin lahaa inay iska ilaaliyaan ayna ka foojignaadaan .
Waa tuugo isa soo bahaysatay una soo dhigatay ajaanibta & dadka wadanka ku cusub .
Sc Walaalayaal! Marka hore waa mahadsan yahay Jimcaale oo maanta qorey maqaal aad waxtar uleh dadka.
Hadaan Jimcaale horey u eedeeyey maqaal uu hada kahor qorey, maanta waa amaanayaa waayo waxaa wanaagsan inaad sheegto qofka wanaaga iyo dhaliisha uu leeyahay, waana mid aduunyadu kudhisan tahay laguna horumaro.
Intaa kadib, waxaan dadka soomaaliyeed kaga digayaa ineysan weligood wax kugadan wicid teleefoon iyo hadii iridka loo soo garaaco waayo qofka wax kaa iibinaaya wuxuu leeyahay guno yar oo qiyaastii ah 50kr ama wax kayar calaa qofkii uu wax ka iibiyaba marka qofka wax gadaya wuxuu isku dayaa inuu dad badan uu hashiis lagalo beenba ha u sheegee. Marka waa wax jira arintaa waana arkay dad badan oo kudhacday arintaa anigoo markii danbe wax kaweydiiyey wiil soomaaliyeed oo shaqooyinkaa kashaqeeya.
asc asxabta oo dhan waxaas wan la kulmay hada ka hor gabar yar oo iswidhish ah ayaa irida igu soo garacday wan ka furay wexey i weydisey warqada korontada waxan moday in ey shirkada korontada ii gu jirta in ey ka socoto wa wayey warqad an u dhibo wexey soo bixisey warqad wexey i tiri halkan ku qor magada wan qoray wexey i tiri person nr kaga qor wan qoray kadib shaki ayaa i galay su aal ayan weydiiyey waxan fahmay in eysan ka socon shirkada iigu jirta waxay iri aniga qalad ayan sameyey waana ka baxay heshiiskan afkana si fiican uma aqaan lkin waxan ku dhagay warqadi aan saxiixay waxan u wacday qof afka taqaan si la iiga fur furo ayey weyday waxan iri ii dhiib marki ey ku sii indha adagtahay in ey i gelisiiso waxan ku dhahay uma baahni in aad adiga i caawiso warqadine wan jeexay iga bax ama boliska ayan wacaa wey iga baxday marka waa tuugo cad on mugdi ku jirin waxan idinka codsanaya in dadka cusub loo sheego qof walba qofti ey taqaano waa mahad san tihiin
HOOGAY TOLOOW TAASI MA WALSHEEYBAA ALA WALEE MANTAY IISHEGAYSAY INAY ISKAGA SAXIXIDAY AYADOO MEL MARAYSA INTA WAX LO AQRIYAY 4 BILOOD KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK WALEE WAYABA SOMALI ILAHAY DALKODA HA UDAJIYO WA JAHILNIMO NAHAYSA
Deeqa jaahilnimo hadeey ku hayso meelaha wax laga barto tag soomaali jaahilnimo ma haysee. Mida kale waxaan leeyahay umada waxeey arkaan iska saxiixo iswaydii marka hore waxaad saxiixayso ma u baahan tahay, maxeey yihiin. Laakiin hadaad u saxiixdo wax yeey ku dhaafin hada jaahilnimo maahane waa hunguri waynin ee kheyr iyo qasaaraba ku qanac Wabillaahi tawfiiq.
Anaa ku nool deegaankan ay arrinta ka dhacday waana run in ay galen heshiiskan. lkn hadda shirkadihii ayaa garwaaqsaday in ay ka la noqdaan heshiiska dadkan soomalida ah ee ku nool tuulada ka tirsan gobolka Jämtlands län
Abshir somali says:
asc wallalyaal aniga anigu waxaan ka shaqayn jiry shirkad iswidish ah oo korontada ah telfoonka baan u diray jiray dadka marka marar badan somali baan la hadalay jiray lakiin af somali baan ku fahmsin jiray xita af carabiga waan ku hadala oo waan la hadalay jiry carab muhiimka waa in u qofku iska ilaalaya marka codka laga duubayo waana shaarci daro hadi add qof oo an wax fahmin add cod iskaga duubatid sida ula socoda hada shaqadaas waan iska dayaay lakiin dad badan baan la hadalay jiray oo somali ah , iswdish , carab ..mm.
hadda ka hore baa sidaas oo kale wax loo khiiyaamaye saxiibkaye oo wax loo keenaye triis ama khamaar wax la ugu jiira lacaga badan baad ku guulaysa tahaye ee waa in aad halkaas saxiixdaa markaas waxaan ku soo diranaa warqada xiiliga aad dhala tahaye iyo addriskagan halkan ku qora markaas baa bil kaste wax u soo dirsan jiiraan 300 oo kr waxaa ku dhahaan bishan intaas baad bixinaysaa 1 haadhan waa la ugu soo diryaa!! bishi denbe 250 kroon baa u soo direen intaas baad bixinaysaa!! waxaba yaan hadlka sii waddinemarba marka ka denbaysaa lacagta waa ku badinayeen!! maalin baan aadi markaas wuxu igu jiira saaxiiba warqadaas baa la ii soo diraa bil kaste lacaga baan bixiyaa waxaan ka baqaye hadii aan bixin waayo in ganax la ii soo tuuro markaas niinyow maxaan sameeye!! warqadii baan aakhriyeye wax ku qoran waa in aad soo bixisaa lacagtii waxa la tabayaa in aad bixin weliye! iyo wax yaab kale oo ka hadlaya sida loo bixin laha! nummber meesh ku qoran baan wacaye maxaad ka qaadaysaan baan ku dhaahaye niinkan lacagta waxa igu jawaabeen wuxu saxeexaye heshiisa aha 3 biilood aha! markaas bishan baa ugu denbaysa!! markaas dadka somaliaidawax aan garaniin baa iska saxeexaan ama iska geelan!!